Azonao atao izao ny mividy ny Xiaomi Mi Band 3 any Espana | Androidsis
Efa telo volana mahery izay no nanoloran'i Xiaomi ny fehin-tànana vaovao. Ny maodely vaovao an'ny orinasa dia ny Xiaomi Mi Band 3, izay miavaka amin'ny fananana ny efijery lehibe indrindra hatramin'izao. Na dia navoaka aza taloha, dia mbola voafetra ihany ny fahafahany manerantany. Soa ihany, any Espana dia tsy mila miandry isika vao hividy azy.
toy ny manomboka anio dia afaka manao azy amin'ny fomba ofisialy amin'ity Xiaomi Mi Band 3 ity isika. Farany, ho hita izao ny fehin-tànana vaovao an'ny marika sinoa. Modely iray tadiavin'ny marika hanitarana ny fisiany amin'ity sehatry ny tsena ity.
Azontsika atao ny mividy azy manomboka anio, na dia mandritra ny fotoana aza dia amidy amin'ny Amazon sy amin'ny fivarotana Xiaomi ihany izy io. Hanao izany amin'ny vidiny 29,90 euro, izay ilay efa nambara tamin'ny famelabelarany. Ka tsy misy tsy ampoizina amin'ity tranga ity.
Herinandro fotsiny no misy an'io ao Amazon, ary hatramin'ny 14 septambra Azontsika atao koa ny mividy an'ity Xiaomi Mi Band 3 ity amin'ny fomba ofisialy any amin'ny magazay ara-batana, toa ny FNAC na MediaMartk, mpizara mahazatra ny vokatra marika sinoa eto amintsika.
Ka somary hivezivezy ny fandefasana an'ity Xiaomi Mi Band 3 ity, fa tsy mila miandry intsony izay hahafahana mahazo azy. Fehin-tànana miaraka amin'ny tanjona hihoatra ny varotra teo aloha, izay nanjary fahombiazana lehibe ho an'ny marika. Ka asa sarotra no miandry anao.
Raha efa nividy azy ianao dia afaka ampifanaraho Mi Band 3 miaraka amin'ny mpitari-dalana antsika.
Mbola ho hita eo raha mahay mivarotra tsara any Espana izy. Ny fizarana fitafiana dia mitombo haingana eny an-tsena, noho izany tsy hahagaga raha noho ny vidiny ambany, ity Xiaomi Mi Band 3 ity dia fahombiazana vaovao ho an'ny mpanamboatra. Hividy ity fehin-tanana ity ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi Band 3 misy any Espana manomboka anio
Namoaka sary vaovao an'ny Nokia 9
Ny Google Pixel 3 dia haseho amin'ny 9 Oktobra any New York